ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပုံ– ကျမ်းစာမူ ငါးခု
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်နိုင်ပုံ
အတိတ်မှ ပုံရိပ်များ ရောဘတ် ဘွိုင်းလ်
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ပင့်ကူပျံရဲ့ ဝေဝါးတဲ့အမြင်အာရုံ
နိုးလော့! | မတ် ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘစ်လာမာ ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုရိုမို အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
“ငါဘာများ မှားခဲ့ပါလိမ့်” ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက မိုက်ကယ် *ကို စိတ်ဒုက္ခပေးနေတယ်။ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သူအတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ကလန်ကဆန်လုပ်တတ်တဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ် သားကိုမြင်တိုင်း အဲဒီမေးခွန်းက သူ့စိတ်ကို ဒုက္ခပေးနေတယ်။
စပိန်မှာနေထိုင်တဲ့ တယ်ရီကတော့ အောင်မြင်တဲ့ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပုံရတယ်။ သားဖြစ်သူ အန်ဒရူး ဒီလိုပြောပြတယ်– “အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးဘဝအမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကို စာဖတ်ပြတာ၊ အတူကစားတာ၊ အတူလျှောက်လည်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။ သင်ယူရတာကို ပျော်စရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။”
ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်စေမယ့် အကြံဉာဏ်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ပညာရှိအကြံပြုချက်တွေကို လိုက်လျှောက်တဲ့အတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုပါ အကျိုးရှိကြောင်း ဖခင်များစွာ တွေ့ ရှိခဲ့ကြတယ်။ ဖခင်တွေကို ထောက်ကူပေးတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာပါ လက်တွေ့ကျအကြံပြုချက်တချို့ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
၁။ မိသားစုကို အချိန်ပေးပါ
ဖခင်တစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်ကလေးတွေဟာ သင့်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း ဘယ်လိုတင်ပြပါသလဲ။ ကလေးတွေရဲ့ နေရေးထိုင်ရေး၊ စားရေးသောက်ရေးအတွက် သင်အနစ်နာခံကြိုးစားတဲ့အပြင် တခြားအရာများစွာကိုလည်း သင် လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေဟာ သင့်အတွက်အရေးကြီးလို့သာ ဒါတွေကို သင်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်လုံလုံလောက်လောက် မပေးဘူးဆိုရင် သင်ဟာ ကလေးတွေထက် အလုပ်၊ သူငယ်ချင်း၊ ဝါသနာပါရာနဲ့ တခြားအရာတွေကို ပိုအလေးပေးတယ်ဆိုပြီး သူတို့မြင်သွားနိုင်တယ်။
ဖခင်တစ်ဦးဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးကို အချိန်စပေးသင့်ပါသလဲ။ မိခင်ကတော့ ကလေးငယ် ဗိုက်ထဲရှိချိန်ကစပြီး ကလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၁၆ ပတ်လောက်မှာ မမွေးသေးတဲ့ကလေးငယ်ဟာ အသံစကြားနိုင်ပြီ။ အဲဒီအခါ ဖခင်ဖြစ်သူလည်း မမွေးသေးတဲ့ကလေးနဲ့ စပြီးပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီ။ ကလေးရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်နိုင်တယ်၊ ကလေးလှုပ်တာကို စမ်းသပ်နိုင်တယ်၊ သူနဲ့စကားပြောနိုင်ပြီး သူ့ကို သီချင်းဆိုပြနိုင်ပါတယ်။
ကျမ်းစာမူ– သမ္မာကျမ်းစာခေတ်က အမျိုးသားတွေဟာ သားသမီးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ကြတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ပုံမှန် အချိန်အသုံးပြုဖို့ ဖခင်တွေကို အားပေးထားတယ်။ ဒီအချက်ကို တရားဟောရာ ၆:၆၊ ၇ ပါ ဒီကျမ်းစကားတွေမှာ အထင်အရှားတွေ့ရပါတယ်– “ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။ ထိုစကားကို သင်၏သားသမီးတို့အား ကြိုးစား၍သွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ထိုင်လျက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်လျက်၊ ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ ထိုစကားကိုပြောရမည်။”
၂။ ဖခင်ကောင်းတွေဟာ ကောင်းစွာပြောဆိုဆက်သွယ်တတ်သူဖြစ်
အလွယ်တကူအပြစ်မမြင်ဘဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ နားထောင်ပေးပါ
ကောင်းစွာနားထောင်တတ်သူဖြစ်မှသာ ကလေးတွေနဲ့ ကောင်းစွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တရားလွန်တုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘဲ နားထောင်တတ်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
သင်ဟာ ဒေါသထွက်လွယ်သူ၊ အလွယ်တကူအပြစ်မြင်တတ်သူလို့ သင့်ကလေးတွေယူမှတ်ထားရင် သူတို့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို သင့်ကို ပြောပြချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနားထောင်ပေးတဲ့အခါ ကလေးတွေကို သင်အမှန်စိတ်ဝင်စားကြောင်း တင်ပြရာရောက်တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း သူတို့ရဲ့အတွေးလေးတွေ၊ ခံစားချက်လေးတွေကို သင့်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။
ကျမ်းစာမူ– သမ္မာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့ လက်တွေ့ကျဉာဏ်ပညာတွေက နေ့စဉ်ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အကျိုးပြုပါတယ်။ ဥပမာ၊ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဒီလိုဆိုထားတယ်– “လူတိုင်းသည် နားထောင်ခြင်း၌ လျင်မြန်ရမည်။ စကားပြောခြင်းနှင့် အမျက်ထွက်ခြင်း၌ နှေးရမည်။” (ယာကုပ် ၁:၁၉) ဒီကျမ်းစာမူကို လိုက်နာတဲ့ဖခင်တွေဟာ သူတို့ကလေးတွေနဲ့ ကောင်းစွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
၃။ မေတ္တာနဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ပါ၊ ချီးမွမ်းပေးပါ
သင်စိတ်ဆိုး၊ ဒေါသထွက်နေရင်တောင် သင်ဟာ ကလေးရဲ့ရေရှည်အကျိုးအတွက် မေတ္တာနဲ့ဆုံးမနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေပါ။ အကြံဉာဏ်ပေးတာ၊ အမှားပြင်ပေးတာ၊ သင်ကြားပေးတာ၊ လိုအပ်ရင် အပြစ်ပေးတာတို့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဖခင်က ပုံမှန်ချီးမွမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ဆုံးမတဲ့အခါ ပိုပြီးထိရောက်မှာဖြစ်တယ်။ ရှေးပညာရှိစကားက ဒီလိုဆိုတယ်– “လျောက်ပတ်သောစကားသည် ငွေအပြောက်မှာစီချယ်သော ရွှေရှောက်ချိုသီးနှင့်တူ၏။” (သုတ္တံ ၂၅:၁၁) ချီးမွမ်းစကားက ကလေးတွေကို လိမ္မာရေးခြားရှိစေတယ်။ ကလေးတွေဟာ အသိအမှတ်ပြုခံရ၊ တန်ဖိုးထားခံရတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာတယ်။ ကလေးကိုချီးမွမ်းဖို့ အခွင့်အရေးရှာတဲ့ ဖခင်တစ်ဦးဟာ မိမိကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာအောင် တည်ဆောက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး မှန်ရာကို ကြိုးစားလုပ်ဖို့ အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။
ကျမ်းစာမူ– “အဖဖြစ်သူတို့၊ သားသမီးများ ဒေါသထွက်ရန် မပြုကြနှင့်။ ထိုသို့ပြုလျှင် သူတို့သည် စိတ်ပျက်အားငယ်ကြလိမ့်မည်။”—ကောလောသဲ ၃:၂၁။
၄။ သင့်ဇနီးကို မေတ္တာပြပါ၊ လေးစားပါ
ဖခင်ဖြစ်သူ ဇနီးအပေါ်ဆက်ဆံပုံကလည်း ကလေးတွေ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်စုက ဒီလိုရှင်းပြတယ်– “ကလေးတွေအတွက် ဖခင်တစ်ဦးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုက ကလေးတွေရဲ့အမေကို လေးစားခြင်းဖြစ်တယ်။ . . . အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေပြီး အချစ်ခံရတယ်လို့ ခံစားရစေတယ်။” *—The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children.
ကျမ်းစာမူ– “ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့၊ . . . သင်တို့၏ဇနီးကို ဆက်၍ချစ်နေကြလော့။ . . . သင်တို့အသီးသီးသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်သကဲ့သို့ ကိုယ့်ဇနီးကို ချစ်ကြလော့။”—ဧဖက် ၅:၂၅၊ ၃၃။
၅။ ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ သင်ယူပါ၊ သင်ပေးပါ
ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးထဲကချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဖခင်တွေဟာ ကလေးတွေကို တန်ဖိုးအရှိဆုံးအမွေအနှစ်ပေးနိုင်တယ်။ အဲဒါကတော့ ကလေးတွေဟာ ကောင်းကင်ဖခင်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခြင်းပါပဲ။
ကလေးခြောက်ယောက်ကို ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ ကြိုးစား ပမ်းစားပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ယေဟောဝါသက်သေတစ်ဦးဖြစ်သူ အန်တိုနီယိုက သမီးတစ်ယောက်ဆီကနေ ဒီစာကို ရရှိခဲ့တယ်– “ချစ်ရပါသောအဖေ၊ ကျွန်မကို ယေဟောဝါဘုရားသခင်၊ လူသားချင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါက သမီးကို မျှမျှတတရှုမြင်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်စေပါတယ်။ အဖေဟာ ယေဟောဝါကိုချစ်ပြီး သမီးကိုလည်း တကယ်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ အဖေ့ရဲ့အသက်တာမှာ ယေဟောဝါကို ပထမနေရာမှာထားခဲ့ပြီး သမီးတို့အားလုံးကို ဘုရားပေးတဲ့ဆုအနေနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေ။”
ကျမ်းစာမူ– “သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့။ ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။”—တရားဟောရာ ၆:၅၊ ၆။
ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဒီအချက်ငါးချက်ထက်မက ပိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် သင်ဟာ ဖခင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေမဲ့လည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖော်ပြပါမူတွေကို မေတ္တာပါပါ၊ မျှမျှတတကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဖခင်ကောင်းတစ်ဦး အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ *
^ စာပိုဒ်၊3ဒီဆောင်းပါးပါ အမည်တချို့ကို ပြောင်းထားပါတယ်။
^ စာပိုဒ်၊ 19 ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ကလေးတွေရဲ့အမေနဲ့ မပေါင်းတော့ဘူးဆိုရင်တောင် သူ့ကို လေးလေးစားစား၊ သိက္ခာရှိရှိဆက်ဆံတဲ့အခါ ကလေးတွေကို မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိအောင် ကူညီပေးရာရောက်တယ်။
^ စာပိုဒ်၊ 25 မိသားစုအသက်တာအတွက် ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်တွေရလိုရင် ယေဟောဝါသက်သေတွေထုတ်ဝေတဲ့ မိသားစုပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက် စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ ဒါမှမဟုတ် www.jw.org ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ “မိသားစုအတွက်” ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဟာ အချိန်မပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ အလုပ်မများ
ဘာဘေဒိုးကျွန်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး နယူးယောက်စီးတီးမှာ ဇနီး၊ သားသုံးယောက်နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ ဆလ်ဗန်ဟာ ဘတ်စကားမောင်းတယ်။ ညနေသုံးနာရီလောက်ကနေ နောက်နေ့မနက် သုံးနာရီ၊ လေးနာရီအထိက သူ့အလုပ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ ကြာသပတေးနဲ့ သောကြာနေ့မှာ နားရပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေညတွေမှာ အလုပ်ဆင်းရပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်မပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ သူ အလုပ်မများပါဘူး။
ဆလ်ဗန် ဒီလိုပြောပြတယ်– “ခက်တော့ခက်ပေမဲ့ အချိန်ပေးနိုင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားတယ်။ သားတစ်ယောက်ချင်းစီကို အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် ကြာသပတေးနေ့ခင်းပိုင်း၊ သားကြီးကျောင်းကပြန်ရောက်ချိန်မှာ သူ့ကိုအချိန်ပေးတယ်။ သောကြာနေ့မှာ သားလတ်ကို အချိန်ပေးတယ်။ သားငယ်အတွက်တော့ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းဖယ်ထားတယ်။”
“အဖေက သမီးနဲ့အတူ ကစားတယ်၊ ညမှာ သမီးကို စာဖတ်ပြတယ်။” —စီရာ၊ အသက် ၅ နှစ်။
“ပျော်စရာကစားနည်းမျိုးစုံကစားပြီးနောက်မှာ အဖေက ‘ကလေးတို့၊ အခု သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ အချိန်ကျပြီ’ လို့ပြောတယ်။ တခြားနေ့တွေမှာ သားတို့ တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ‘အခု ကစားဖို့အချိန်တန်ပြီ’ လို့ အဖေပြောတတ်တယ်။”—မိုက်ကယ်၊ အသက် ၁၀ နှစ်။
“အဖေက သူ့ရဲ့အလုပ်၊ သူ့ရဲ့ဝါသနာတွေကို အကြောင်းပြပြီး အမေ့ကိုမကူညီဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ ကူချက်ပေးတယ်၊ ပန်းကန်တွေကူဆေးတယ်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်၊ အမေ့ကို မေတ္တာနဲ့ ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းကနေ အခုအချိန်အထိပဲ။”—အန်ဒရူး၊ အသက် ၃၂ နှစ်။
သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘဝရဖို့ သမ္မာကျမ်းစာက ကူညီပေးနိုင်သလား
သမ္မာကျမ်းစာပါ ပညာရှိအကြံပြုချက်က လူသန်းပေါင်းများစွာကို သာယာချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝရဖို့ အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပြီ။
မတ် ၂၀၁၃ | ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပုံ
နိုးလော့! မတ် ၂၀၁၃ | ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပုံ